Izinkathi Zonyaka eKildare - IntoKildare
Kusukela ezinsukwini zasentwasahlobo ezihlwabusayo kuze kube kusihlwa eside segolide sasehlobo nobusuku obumnandi basebusika, uKildare unokuthile okuhlukile angakunikeza ngenkathi ngayinye.
Njengoba i-Ireland iyisiQhingi, amazinga okushisa ahlala emnene unyaka wonke. UJanuwari noFebhuwari yizinyanga ezibandayo kakhulu, kanti uJulayi yinyanga eshisa kakhulu yonyaka. Uthando lwase-Ireland lokukhuluma ngesimo sezulu futhi uma unikezwa isimo salo esiguqukayo uvame ukuzwa abantu bekhuluma 'ngezinkathi ezine ngosuku olulodwa' okusho ukuthi uma upakisha ukuhlala eKildare zilungiselele konke okwenzekayo!
Ungahlola izimo zezulu zikaKildare ku- Iwebhusayithi ye-Met Eireann.
Ngisiphi isikhathi esihle sokuvakashela iKildare?
Summer yisikhathi esithandwa kakhulu ukuvakashela iKildare. NgoJuni, uJulayi nango-Agasti, inani lezivakashi liyakhula, njengoba abantu befika bevela phesheya kwezilwandle bezohamba ngenkathi isimo sezulu sifudumele. Njengoba amahlathi nezindawo ezisemaphandleni ziluhlaza futhi zigcwele impilo, kanye nokuqhakaza komhlaba kugcwele, ihlobo yisikhathi esihle sokujabulela ukuhamba ngesikebhe phansi komsele, uhambe izintaba ulaze intambama engadini kabhiya.
Uma ungathanda ukujabulela izinsuku ezibalele, kodwa ngezixuku ezimbalwa, isikhathi esihle sokuya eKildare singenile Entwasahlobo. Kusukela ngoMashi kuya kuMeyi isimo sezulu siya sifudumala - kodwa izixuku sezinciphile. Hlola ngaphandle kuphithizela ngombala nokuphila ngezinsuku ezipholile nomoya omningi ohlanzekile.
Ngesikhathi autumn, inkathi yezokuvakasha isiyaphela, okusho ukuthi isikhathi esimatasa kangako sonyaka sokuhlola izindawo zasendle zaseKildare, mhlawumbe uze uzitholele nezindawo ezithandwa kakhulu. Isimo sezulu sekwindla singaba yikhadi lasendle - imvamisa sithola amaviki ambalwa amahle ngoSepthemba. Qaphela ukuthi u-Okthoba ngokwezibalo uyinyanga emanzi kakhulu, kepha futhi yi-Halloween nalapho ubukhulu beqiniso bendawo yasekwindla buqala ukukhombisa imibala yayo.
Irish Winter ibonakala ngezinsuku ezimfushane nobusuku obude, kepha ekuqhubekeni kukaKhisimusi awukwazi ukushaya umoya wokugubha emoyeni. Songa okufudumele bese uyothatha uhambo olushisayo bese wehla ngeGuinness phambi komlilo endaweni yokuthokomela ethokomele.
Mashi - Meyi
Isikhathi sosuku esimaphakathi
Juni - Agasti
Septhemba - Novemba